musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius nezita rezita rokuti "Saint Max". Yedu Yevana Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeinozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hupenyu uye Kukwira kwaAllan Saint-Maximin. Mifananidzo Credits: ChronicleLive, 90Min, Twitter uye GetFootballNewsFrance
Ehe, munhu wese anoziva kuti Saint-Maximin chimwe chinhu chakasiyana, a jack mubhokisi ane kumhanya, hunyanzvi uye hunyengeri pamunda vanoita vafadze bhora. Nekudaro, vashoma chete vashoma vanofunga Allan Saint-Maximin's Biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Nhoroondo Yemhuri uye Hupenyu hwepakutanga
Kutanga kubva, mazita ake azere Allan Irénée Saint-Maximin. Akazvarwa pazuva re12th raKurume 1997 kuna amai vake, Nadège Saint-Maximin, uye baba Alex Saint-Maximin muChâtenay-Malabry, anogara kumaodzanyemba akadziva kumadokero kweParis, France.
Kufanana nehama dzake; Thomas Lemar, Thierry Henry, Dimitri Payet uye Kingsley Coman, murume wechiFrench ndewe France yeGuianese Creole dzinza naCarribean neSouth American mhuri yemhuri. Kunyangwe akaberekerwa muFrance, Saint-Maximin ane mhuri yake anobva kunyika dzeGuyana (mai vake) uye Guadeloupe (baba vake).
Kuzvarwa kune vabereki vakapfuma kwakapa Saint-Maximin kutanga kwakajeka kune hupenyu. Akakurira mumhuri yemhuri yepamusoro uye aive akasununguka chaizvo semwana. Vabereki vaAllan Saint-Maximin vaive nedzidzo yepamusoro yemari uye havana kumbobvira vatambura nemari. Waizviziva here? Mai vake vakambobata chinzvimbo cha 'director of education'pachikoro chakakurumbira chiri muParis Suburbs apo baba vake Alex vaishanda semukuru wehofisi paParis Diderot University iri muParis, France. Vabereki vese vari vaviri vakarera vana vavo vachinamatira pakutenda kwechiKristu.
Makore ekutanga: Allan Saint-Maximin akarererwa ari mudiki pavana vatatu. Ane hama yakura inonzi Kurtys uye hanzvadzi ine zita rinoramba risingazivikanwe panguva yekunyora. Kukura muguta reMeudon, mudiki Saint-Maximin akatanga kutamba uye mafashoni seanofarira kuita zvinhu. Iyo mafashoni maitiro kune hupenyu yakamuona achitora yekutanga fananidzo yemusoro, kusimudzira kwakaramba kuchienderera nanhasi.
Kuda kwaAllan Saint-Maximin kwemabhande emusoro hakusi kutsva. Mufananidzo wake wehudiki unotaura zvese. Chikwereti: DailyMail
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Vabereki vaSaint-Maximin uye vadzidzisi vechikoro vakamupa zvese kukosha kunodiwa kuti vamuitise iye mukukura. Kare ikako semwana mudiki wechikoro, Allan akapihwa ma10 euros naamai vake nguva imwe neimwe paakasiya kumba achienda kuchikoro. Akashandisa mari kutenga maswiti uye kutsigira shamwari dzake dzaishayiwa.Chiratidzo chekutanga kwake rupo). Ndichiri kuchikoro, tarenda yaSaint-Maximin mune zvemitambo nenhabvu yakawanikwa ikaenderera mberi ichisungirirwa iye pasina mudzidzisi kana chipangamazano. Achitaura pamusoro pazvo, akamboti;
“Tarenda rangu rakauya kwandiri. Ini ndaitora bhora kwese kwese, kuchikoro, kumba, nezvimwe. Ini ndaitamba nhabvu nguva dzese kunyangwe ndisiri kudzidziswa. Yakanga iri yangu nzira yekuita, nenzira chaiyo yandaida. Rangu nehunyanzvi hwangu ndakazvidzidziswa ”
Pakati pezvisarudzo zvese zvemitambo, Yange iri mitambo yemitambo yakauya yekutanga kuvonga kune yake yakasikwa yekumhanya iyo yave iri kubvira achiri mwana. Gare gare, akaisa Athletics kuBhora uye akatanga kutamba mutambo uyu nemukoma wake mukuru, Kurtys uyo panguva iyoyo akashuvira kuve mutambi wenhabvu. Pakutanga, Saint-Maximin akavimba nehunyanzvi hwake, kusimudzira kwakamuita kuti atende kuti aive netarenda rekuenda kuhunyanzvi.
Tagging pamwe nemunun'una wake, basa rekutanga raSaint-Maximin rakave kwaari kuti adzidze maitiro ekuita zvinoshamisa nezvinhu nebhola renhabvu. Akaita izvozvo zvese muzita rekumira kunze kwechaunga chevakomana munharaunda yake- nzvimbo yaive nemikana yebhola shoma. Zuva nezuva mumazuva kunze, murume wechiFrench akatanga kukudza hunyanzvi hwake pakongiri pamwe nehuswa. Saint-Maximin akatamba nevakomana zvakatenderedza zera remukoma wake (makore maviri kana matatu mukuru wake).
Kumhanya kukuru kwaSale-Maximin pamwe nehunyanzvi hwekuita zvekumuwaridza kwakamuona achiwedzera kudarika vamwe vakomana vemuvakidzani wake. Nhabvu yemumugwagwa aive akanyanya kudzidziswa aive nemukana wekuwana mukana wekuyedzwa naVerrières-le-Buisson, nhabvu yemuno- 34 Maminitsi kutyaira uye 10.8km kubva kumhuri yake kumusha. Panguva yacho vaviri mukoma (Kurtys kuva wekutanga) akabudirira akawana kubvumirwa na iyo academy, iyo mufaro we Saint-Maximin's nhengo dzemhuri zvechokwadi dzaive dzisina miganhu.
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Paaive mudiki, Saint-Maximin akadzidza kutengeserana kwake kumakirabhu evechidiki Verriere-le-Buisson kwemwedzi mishoma asati afambira mberi kuenda kune imwe kirabhu, US Ris-Orangis yaive mberi. 55 Maminitsi drive / (34.5 km) kubva kumhuri yake kumusha kuMeudon. Kirabhu, akachengetwa nevadzidzisi vaviri, Jean-Louis Lessard uye Didier Demonchy. Saint-Maximin akatamba pasi pekudzidziswa kwemudzidzisi wake Frédéric Ferreira panguva yake ye3 makore ekunyora.
Sezvaizotarisirwa nevakawanda, akatanga zvakanaka pabasa rake. Saint-Maximin ainakidzwa nekutarisa nekuti airamba achitaridza mhanyisa uye hunyanzvi. Izvi zvakamuona achifambira mberi kuenda kuFrench's multi-chinangwa academy inonzi ACBB (Athletic Club de Boulogne-Billancourt) mugore re2007.
ACBB yakanga isiri yekungodzidza chete, asi rudzi rwemitambo apo Vabereki vese vakada kunyoresa vana vavo. Izvi zvaidaro nekuti iyo academy yaive nemukurumbira wekuburitsa vatambi vayo kumakirabhu epamusoro eFrance. Hatem Ben Arfa, Yacine Bammou, kudoma asi vashoma vakapfuura nekirabhu.
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira
Sezvo Saint-Maximin paakakura kuva mudiki, akatanga kurota kutamba mukati Premier League. Kare ikako, mukomana wechiFrench aizoenderera mberi nekutarisa veArsenal Thierry Henry zuva rose terevhizheni.
Ichishandira kurota kwake, nyeredzi diki yakaramba ichiita zvayaigara ichiita zvakanak pazita yekutamba- achizvitaura aine madhiri ake uye achimhanya nenzira yakasarudzika. Kutsanangura kubatana kwake pakati pevaviri vake, Saint-Maximin akamboti;
“Muchikoro ichi, vanodzidzisa, kubata kumwe chete, kubata maviri. Chero munhu akaona kuti ini ndakarerwa zvakasiyana. Ini ndairova zvakanyanya uye ndakaudzwa kuti nditambe pamusoro pevakuru vakakura uye vakasimba vakomana. Ndakadzidza kurova uye panguva imwechete, ndichivhewherera kurohwa ”
Murairidzi wake panguva iyoyo, Guillaume Sabatier, akavaka boka rake rakamukomberedza. Mumutambo wake wekutanga kukwikwidza, Allan Saint-Maximin akaita fungidziro nekurova 8 zvinangwa. Achifunga chiitiko muhudiki hwake, akawana mukurumbira wakakura pakati pevanyori vese muFrance. Nenguva isipi, Saint-Maximin akatora sarudzo yakakura kwazvo yebasa rake rezvedzidzo nekujoinha Saint-Étienne, kirabhu yakamupa nzira yakachengeteka akananga kudzidzo yeGumi mugore ra2013.
At Saint-Étienne B, Saint-Maximin akazova mumwe wevatambi vavo vanopenya, kusimudzira kwakamuita iye French yenyika callup. Zvine kusuwa, kufambira mberi muchikwata chevatambi venhabvu havana kuona nyanzvi dzeFrance dzichiwana nguva yakakwana yekutamba. Kuenda kuMonte hakuna kuzoshandawo sezvo Saint-Maximin aisakwanisa kubhenji Bernardo Silva, Anthony Martial uye João Moutinho avo vaive pamusoro pe simba ravo.
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Simuka Mukurumbira
Kufambisa pane chikwereti kuenda Sporting Club Bastiais yakava nzira yakatendeka yekuita kwaSanta-Maximin, imwe isina kungobhadhara BUT kunyengerera Nice kumusayina kubva kuMonaco muzhizha re2017.
KuNice, Saint-Maximin akatanga kuita matanho akanyanya, kuve mutambi wechikamu pasi pePatrick Viera. Kuita kwaakaita kirabhu iyi kwakakwezva maneja weNewcastle United, Bruce uyo akange achitsvaga mumwe munhu wekufadza vateveri vake, zvikaita kuti vabve pazvigaro zvavo.
Saint-Maximin yePremier League zviroto zvakazoitwa kuti zvibve mushure mekunge abatana neNewcastle pa2nd yaAugust 2019. Pangosvika mumwaka we2019 / 2020, iye anozvishongedza nhabvu ane jeed blonde, spiky dreadlocks yakatanga kufadza vateveri. Saint-Maximin akawana mwoyo yePremier League vadziviriri vanomhanya nemabhiza ake ekumberi.
Allan Saint-Maximin akabva angova mafeni anodikanwa mumwaka wake wekutanga weligi. Image Chikwereti: DailyMail
Yese nguva Saint-Maximin aine bhora, iwe unoziva zvaachaita- kusvetuka, kutendeuka, kushaya simba, kushambira, kushamisika zvakapfuura vapikisi uye kutyaira kumberi nebhora rakabatanidzwa pamakumbo ake. Kumumisa ndeimwe imwe nyaya zvachose sekucherechedzwa kubva kuhuchapupu hwevhidhiyo pazasi.
Kuona vhidhiyo iri pamusoro, unobvuma kuti Saint-Maximin ndiye, pasina kupokana, 'JAKI ' mubhokisi. Inowedzera kugona kwake uye hunyengeri (murima rake dema uye chena), iyo yakasimba winger inewo huwandu hwakawanda hwesimba simba rekuita talismanic kupora. Pazasi pane chidimbu chevhidhiyo chiratidzo.
Panguva yekunyora, Saint-Maximin hapana mubvunzo kuti ndiye anonyanya kukosha mutambi muchikwata cheNewcastle uye mumwe wevatambi vanonakidza kutarisa muPremier League. Pasina mubvunzo, vateveri venhabvu vakakura vava padanho rekuona mwana mudiki achiuya mune tarenda repasi rese pamberi pavo chaipo. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake mukurumbira, zvine chokwadi kuti vazhinji veNewcastle fan vanofanirwa kuve vakafungisisa kana Allan Saint-Maximin achiroora uye achiri nemukadzi wake kana aine musikana. EHE! Hapana kuramba chokwadi chekuti kutaridzika kwake kwakanaka pamwe chete nemhando yake yekutamba zvinomuisa mune yekuda-rondedzero yeanogona kunge musikana webasa wannabe.
Sekureva kweWTFoot, muFrance uyu akambofungidzirwa kuti ari kufambidzana nemusikana anonzi Margaux akatenderedza 2015, panguva yaaive nechikwata cheGerman (Hannover 96). Maererano nemishumo, Margaux (akafananidzirwa pazasi) zvino anoitika kuva musikana wake wekare.
Allan Saint-Maximin akambofungidzira kuti ari kufambidzana naMargaux. Mufananidzo Wekodhi: WTFoot
Panguva yekunyora, Allan Saint-Maximin akakomborerwa nevanasikana vaviri vanoyevedza (Lyana naNinhia) uyo waanodaidza kuti Mahosi ake. Sezvacherechedzwa pazasi, iwo mabara anochengetedzwa mune bvudzi revasikana vari vaviri chiratidzo chakachena chemufananidzo wababa vavo uye akafanana. Mufananidzo uri kuruboshwe wakanaka Lyana (kuruboshwe) naNinhia (kurudyi) sezvavanonakidzwa nekutonhorera kwevanonakirwa nababa vavo vepamusoro.
Sangana naAllan Saint-Maximin's Vanasikana- Lyana naNinhia. Image Chikwereti: TheTimesUK
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva Allan Saint-Maximin Hupenyu hweMunhu kure nemaitiro ake ese eudiki uye hunyengeri pachigamba hwaizokubatsira kuti uone zvakanaka hunhu hwake.
Kutanga kuenda, uko zvirokwazvo zvakawanda kwaari kupfuura kugona kwake, zvishongo zvemarata uye zvinyorwa zvemagadzirirwo. Ehe!, Ungafunga kuti akangopenga. Asi Saint-Maximin ari chaizvo akangwara uye akajairika munhu anoziva zvaari kuita izvo zviri; kuisa vamwe kutanga pamberi pake. Kutaura neBR, Saint-Maximin akaita kuti nyika izive nezve chishuwo chake chekuita zvese paramende, shambadza mafeni, batsira vamwe vatambi vezvikwata kunyange iwe zvinoreva kusarodza chinangwa. Pazasi pane chidimbu chevhidhiyo chiratidzo.
Aine mwedzi mushure mekubatana neNewcastle, vateveri veEngland North East nerudo vakagadzira nzira dzekupa rukudzo kune yavo nyeredzi manhu- kurudziro yakazvara vana vake. Saint-Maximin ane rwiyo rwakakurumbira kune rake zita- iro rinoimbwa kwete panguva dzemitambo asi kwese kunosanganisira makirabhu. Teerera izvezvi pazasi;
Kune vazhinji vateveri, kuve nemutambi anofara uye zvakadaro anonakidza saSalt-Maximin muchizvarwa ichi chinhu chakanaka kuona. Iye, pasina kupokana, munhu anogona, iye vabereki veNewcastle vanoda kuti vana vavo vateedzere kana vakura. Saint-Maximin akawana rukudzo rwakanyanya kubva kuvadiki mafani avo vazhinji vakabata nemusoro rwiyo rwake, kuimba nezvacho zvisina mhosva.
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Senge panguva yekunyora, Allan Saint-Maximin akaunganidza mhuri yake yekwake akananga kune stardom yekutenda kwake nhabvu. Vabereki vake vakaedza nepavanogona napo kudzivirira vatapi venhau. Rondedzero yemukadzi wake, hanzvadzi uye nhengo dzemhuri dzichiri dzakavanzika. Ivo vanogona kunge vaine nguva dzakanakisa dzehupenyu hwavo nekuda kwekuti imwe yavo ndeyakanyanya. Kurtys uyo asina kugadzira mubhora bhora parizvino anoshanda semupangamazano webasa kune mukoma wake mudiki.
Saint-Maximin inonakidzwa apo nhengo dzemhuri yake dzinopa vanoshaya. Waizviziva here? Chimwe chezvinhu zvekutanga zvaakaita paakasvika paTyneside kwaive kugamuchira kokero uye kuNUFC Fans Chikafu Chebhangi- nzvimbo inoratidza hurombo iyo inodenha nzvimbo huru dzeNorth East England. Kuedza kwevezvenhau kwakatarisana zvakanyanya nevanasikana vake; Lyana naNinhia panguva yezvipo zvavo.
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Lifestyle
Kusvika pakuziva Allan Saint-Maximin's Mararamiro kwaizokubatsira kuti uwane mufananidzo uzere weyekugara kwake.
Kuwana kutenderedza € 2,000,000 pagore neiyo vhiki yega wage yeUX 38.462 (panguva yekunyora) zvirokwazvo kunomuita miriyoni yemabhora- mutambi- chiratidzo chehupenyu hwoumbozha. Iyo yejira-inoziva nhabvu inonakidzwa nehupenyu hwakajeka hupenyu hunoonekwa nyore ne yakasarudzika sedan iyo inokosheswa $ 151,600 (muhoro wake kwemavhiki maviri nehafu).
Allan Saint-Maximin Mota
Zvakare pamararamiro, yiwe uye ini ndoziva Saint-Maximin ane fashoni huru pfungwa sekucherechedzwa kubva pagomba rekutamba. The MuFrench murume ane fashoni mogul, anofarira kutaridzika zvakanaka pairi uye kubva pagomba. Sezvinoonekwa mukati memakore ake ekutanga, mugadziri wekupa (kunyanya mabhanhire emukati) ave ari siginecha yake kuratidzika kubvira pamazuva ake ekutanga.
Allan Saint-Maximin Mararamiro haana kutanga nhasi. Mufananidzo Wemifananidzo: Instagram
Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Akaudzwa Kufukidza Musoro wake Webhendi Vagadziri: Waizviziva here? Nyeredzi yeNewcastle Allan Saint-Maximin akambomanikidzwa kuvhara bhandi rake re $ 180 Gucci ne STICKER panguva yekukunda kweManchester United kuitira kudzivirira kutyora mitemo yekutsigira. Munguva iyoyo, mutambi anonyengedza aifanira kuisa chena patepi pamusoro peGucci logo.
Allan Saint-Maximin anomanikidzwa kuvhara rake £ 180 Gucci bhandi repamba paanotamba panhandare. Image Chikwereti: Zuva
Allan Saint-Maximin's Tatoo yeFans: kuva Mifananidzo ye Superhero haizi yeanopera moyo fan. Kufananidzirwa kwaAllan Saint-Maximin kwakamuona achiwana superhero fan base. Vanofa-vakaoma mafeni seizvi (pazasi) vaisazonetseka nekuita kuti rudo rwavo ruzivikanwe nekuwana zvachose tattoo yeziso rake pamuviri wavo.
Chii chake Maitiro ezuva nezuva Anotaridzika Senge: Allan Saint-Maximin mumwe munhu anoshandisa yakasarudzika Workout Isu kuti uwane uye ugare mune chimiro. Iyo inonamira nhabvu inoshandisa nzira isina kujairika yekuita-kubuda. Saint-Maximin inosarudza kumhanya ichidzoka uye kunongedza masitepisi ake senzira yakakosha yekuita kuti arambe akagwinya.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Allan Saint-Maximin Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukawana chimwe chinhu chisingaratidzika sezvakanaka, tapota tigovera icho isu nekupindura pazasi. Isu tichagara tichikoshesa uye nekuremekedza mazano ako.
Aleksandar Mitrovic Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Jamaal Lascelles Childhood Nyaya Yekuwedzera Plus Untold Biography Facts
Djibril Sidibe Kuberekwa Kwebhuku Plus Untold Biography Facts